नेपालमा फेरी बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु हुँदै — Sanchar Kendra
१सपथ लिँदालिँदै जब प्रधानमन्त्रीको मुखबाट राष्ट्रपतिसामु चिप्लियो यस्तो शब्द, त्यसपछि जे भयो…
२रुपन्देहीमा थप दुई जना संक्रमितको मृत्यु, गण्डकीमा संकट झन् बढ्दै
३विवाहभोज खाएपछि कोरोना संक्रमण, एकै घरका ३ जनाको मृत्यु
४ओलीले सपथ ग्रहण गरेलगत्तै प्रचण्ड र नेपालबीच गोप्य भेटवार्ता, के बिषयमा भयो कुराकानी ?
५तिब्र गतिमा फैलिदै कोरोना, बाँकेमा दुई घण्टामा ५ संक्रमितको मृत्यु
६प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै ओलीले गरे मन्त्रीमण्डल बिस्तार, काे-काे बने नयाँ मन्त्री ? नामलिस्टसहित
७प्रधानमन्त्री ओलीले लिए पद तथा गोपनियताको शपथ
८ओली क्याबिनेटका क-कसलाई खुवाइदैछ सपथ ?
९गण्डकीमा कोरोना संक्रमणको डरलाग्दो अवस्था, ९४ जनाको मृत्यु
१०माधव नेपालले किन बोलाए बैठक ?
११ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्नै लाग्दा माधव नेपालले बोलाए आफूपक्षीय नेताहरुको बैठक
१२ओली पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि प्रचण्डले के भने ?
१२एकै ब्यक्तिको कोरोना रिपोर्ट बिहान र बेलुका फरक-फरक, पत्रकारले रिपोर्टिङ गर्दा प्रहरीको हस्तक्षेप
नेपालमा फेरी बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु हुँदै
नेपालगञ्ज । तिव्ररुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भएको छ । देशभर लकडाउन घोषणा नगरिए पनि नेपालगञ्ज शहर सहित बाँकेमा लकडाउन गरिने भएको छ । मंगलबार दिउँसो बसेको सर्वदलिय बैठकले बाँके जिल्लामा कोरोना संक्रमण घटाउन बिहीबारदेखि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा कोरोना संक्रमणका कारण अस्पताल भरिभराउ भएको र लकडाउन बाहेक अर्को विकाल्प नभएको सर्वपक्षिय सुझाव दिएपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल गेलालले विहीबारदेखि लकडाउन हुने सूचना जारी गरेका हुन् । पहिलो चरणमा एक साता लकडाउन गरिने र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिने प्रजिअ गेलालले बताए ।
सर्वपक्षिय बैठकमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवलशम्सेर राणा, भेरी अस्पतालका मेसु डाक्टर प्रकाश थापा, खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपति, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका उपनिर्देशक डाक्टर नितेश कनोडिया, वेस्र्टन हस्पिटलका प्रवन्ध निर्देशक डाक्टर राहुल थापा, विभिन्न राजनितिक दल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दामोदर भण्डारी, पत्रकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतका सहभागिता रहेको थियो । कोरोना विरामीको उपचार भेरी अस्पताल र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा मात्र भैरहेकोछ ।
यी अस्पतालले कोरोना विरामी राख्न ठाउँ नभएको र लकडाउन गरि सम्पूर्ण प्रवन्ध मिलाउन बैठकमा आग्रह गरेपछि कोरोना नियन्त्रण गर्न लकडाउन नै गर्नुपर्ने निस्कर्षमा सबै पुगेका थिए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर राणाले तत्काल एक साताका लागि लकडाउन गर्न आग्रह गरेका थिए । लकडाउन अवधिभर लामो दूरीका सवारी साधनदेखि मान्छे समेत सडकमा हिडडुल गर्न पाउने छैनन् । खाद्यान्न किनमेल गर्न र अत्यावश्यक काममा हिँड्न भने पाइनेछ ।
बाँकेका एसपी ओमबहादुर रानाले लकडाउन पूर्णरुपमा कडाई गरि अनुमति बाहेकका सबै कुराहरुमा पूर्णरुपमा रोक लगाईने बताए । भेरी अस्पतालमा चैत २० गतेदेखि वैशाख ६ गतेसम्म १७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पछिल्लो २४ घण्टाको तथ्यांकअनुसार बाँकेमा ३२२ जना संक्रमित फेला परेकाछन् । यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक उच्च दर हो ।
यस्तै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ को कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि वडा कार्यालय बन्द गरिएको छ । वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालले परिस्थिति अनुकूल नभएसम्मका लागि वडा कार्यालय बन्द गरिएको बताए ।
‘कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि वडाबाट प्रदान गर्दै आएको सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ,’ उनले भने, ‘वडाका सवै कर्मचारीलाई कोरोना लाग्यो, कोरोना झन फैलिन सक्ने भन्दै परिस्थितिअनुकूल नभएसम्मका लागि वडा बन्द गरेका हौँ ।’ वडाध्यक्ष रिजालका अनुसार सोमबार आएको पीसीआर रिपोर्टमा तीन जना र आइतबार आएको रिपोर्टमा तीन जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
कोरोना पुष्टि हुनेहरु कार्यालय प्रमुख, लेखापाल, प्राविधिक, अनमी, सहजकर्तालगायतका कर्मचारी छन् । संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र होम आइसोलेसनमा रहेको वडाध्यक्ष रिजालले सुनाए । यसअघि गत वर्ष फैलिएको कोरोना महामारीमा वडाध्यक्ष रिजाललाई पनि कोरोना संक्रमण भएको थियो ।
उता आइतबार र सोमबार नियमित कक्षा चलाएको बाग्लुङ बलेवाको जनताधन माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र शिक्षक गरी ३९ जनामा मंगलबार मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले उक्त विद्यालयका ९८ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा ३९ जनामा संक्रमण पष्टि भएको कोरोना फोकल पर्सन देवप्रकाश घिमिरेले बताए ।
पुष्टि भएकालाई घरघरमै सुरक्षित रहन भनिएको छ । तर उनीहरु सँगै पढेका अन्य विद्यार्थी बिदा मनाउन कता पुगेका छन् भन्ने विद्यालयमा जानकारी छैन । संक्रमणको जोखिम उच्च छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेपनि विद्यालय बन्द गर्ने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले समेत यहाँ भन्ने सम्बोधन नगरेको भन्दै विद्यालय खोल्ने निष्कर्षमा पुगेको नगर शिक्षा अधिकारी डण्डपाणी शर्माले बताए । संक्रमण बढेपछि अभिभावकले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
बिरामीमा कोरोना पुष्टि भएपछि अस्पतालको सेवा बन्द
उपचाररत एक महिलामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि सिरहा जिल्ला अस्पतालको आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको छ । अस्पतालमा उपचारका लागि गत आइतबार भर्ना भएकी एक महिलामा जाँचपछि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालको आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरिएको हो ।
सङ्क्रमणपछि ती महिलाको सम्पर्कमा आएका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकसमेत रहेकाले तत्काललाई अस्पताल शिल गरी आकस्मिक सेवा मात्र सञ्चालन गरिएको अस्पतालका मेसु डा नागेन्द्रप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।
अस्पतालको आकस्मिक कक्षबाहेक सबै कक्षमा ताल्चा लगाइएको छ । अस्पतालमा रोग निवारक औषधि छर्केपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइने मेसु डा. यादवले बताए ।
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँणेलले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट नेपालतर्फ आवतजावत हुने सम्पूर्ण नाकामा कडाइ गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका साथै नेपाल प्रहरीलाई समेत निर्देशन दिइसकेको बताए । हाल सिरहामा एक महिलासहित सात जना सक्रिय कोरोना सङ्क्रमित रहेको बताइएको छ ।
सपथ लिँदालिँदै जब प्रधानमन्त्रीको मुखबाट राष्ट्रपतिसामु चिप्लियो यस्तो शब्द, त्यसपछि जे भयो…
रुपन्देहीमा थप दुई जना संक्रमितको मृत्यु, गण्डकीमा संकट झन् बढ्दै
तिब्र गतिमा फैलिदै कोरोना, बाँकेमा दुई घण्टामा ५ संक्रमितको मृत्यु
प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै ओलीले गरे मन्त्रीमण्डल बिस्तार, काे-काे बने नयाँ मन्त्री ? नामलिस्टसहित
ओली क्याबिनेटका क-कसलाई खुवाइदैछ सपथ ?
माधव नेपालले किन बोलाए बैठक ?
ओली पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि प्रचण्डले के भने ?